Ahoana ny fomba hanaovana OS X checker hianatra teny | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fomba hanaovana OS X checker hianatra teny iray
Ity dia lohahevitra iray mety mahaliana ary hankasitrahan'ny mpampiasa sasany rehefa avy niady tamin'ny mpanitsy hatrany amin'ny Mac izy ireo. Alohan'ny hahitana an'ity safidy ity ataovy mahay teny iray ny mpanara-tsipelina amin'ny OS X antsika, ny zavatra tsy maintsy ataontsika dia mazava ho azy ny mampandeha ny mpampitsitsy. Ho an'ity dia tsotra be ny fomba handehanana System Preferences> Keyboard> Text ary safidio ny safidy hanitsiana ny tsipelina.
Raha vantany vao navadibadika io safidy io dia afaka manomboka mampiditra ireo teny tadiavintsika ao amin'ny rakibolana ihany isika mba tsy hampiala azy ireo amin'ny teny diso tsipelina. Amin'ny ankapobeny, ny tsipika mena dia hijanona tsy hita eo ambaniny fotsiny na amin'ny tranga sasany izay ampivoarana ny fanitsiana mandeha ho azy, hitsahatra tsy hanao izany.
Tsotra dia tsotra ny dingana ary izany no antony tsy hanitaranay ny lalana hanatanterahana an'io asa io. Ny momba ny fisafidianana ny teny izay tianay ampiana ary ny fipihana tsara amin'ny totozy na ny trackpad-tsika. Raha vao voafantina dia mila tadiavo ny safidy «Mianara teny» izay miseho ary kitiho eo aminy:
Raha vao tsindrio io dia tsy mila manao dingana hafa intsony isika. Rehefa manoratra ny teny amin'ny lahatsoratra, antontan-taratasy na mitovy aminy isika, dia tsy hanamarika azy ho tsy hita intsony ilay mpanadio anay. Fetsy kely nefa mahaliana ity hisorohana an'izay rehefa mampiasa ny checker ao amin'ny OS X dia manondro ny tsy fahampian'ny teny izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fomba hanaovana OS X checker hianatra teny iray
Colossus, ilay fampiharana izay mampiseho ny fampahalalana rehetra fampisehoana an'ny Mac anao